Syncari: Midee oo Maaree Xogta Waxqabad ee Iskudhafka ah, Toos u samee qulqulka socodka iyo u qaybinta aragtiyada aaminka ah meel kasta.
Khamiis, May 13, 2021 Khamiis, May 13, 2021 Douglas Karr
Shirkadaha ayaa ku liqaaya xogta ku urursan CRM-da, otomaatiga suuq geynta, ERP, iyo ilaha xogta kale ee daruuraha. Marka kooxaha hawlgalka ee muhiimka ahi ku heshiin waayaan xogta ka turjumaysa runta, waxqabadka ayaa la xakamaynayaa ujeeddooyinka dakhliguna way adag tahay in la gaaro. Syncari waxay rabtaa inay nolosha u fududeyso dadka ka shaqeeya suuq geynta suuqyada, iibka iibka, iyo dakhliga oo si joogto ah ula halgamaya xogta ku socota helitaanka ujeedooyinkooda. Syncari waxay qaadataa mid cusub
Chili Piper waa xal jadwal jadwal oo otomaatig ah kuu oggolaanaya inaad isla markiiba u qalanto, dariiqa, iyo shirarka iibinta buugaagta ee soo-galista ay u horseedayso xilliga ay u beddelaan boggaaga. Sidee Chili Piper u Caawiyaa Kooxaha Wax iibsiga Mar dambe ma faafineyso waraaqaha qeybinta hoggaanka, ma lahan doono emayl gadaal-iyo-soo-bax ah iyo fariimo cod oo kaliya si loo ballansado kulan, mana jiri doonto fursado badan oo lumaya sababtoo ah gaabis dabagal ah. Qalabka Chili Piper Ku dar Chili Piper waxay ku siisaa rajadaada khibrad jadwal wanaagsan
Sendoso: Ku dhiirrigeli hawlgelinta, helitaanka, iyo xafidista boostada tooska ah
Khamiis, Juun 11, 2020 Jimco, Juun 12, 2020 Douglas Karr
Markii aan ka shaqeynayey barxadda weyn ee SaaS, hal dariiqo oo wax ku ool ah oo aan horay ugu socon jirnay safarka macaamiisha waxay ahayd iyadoo hadiyad qaali ah oo qaali ah u dirno macaamiisheenna bartilmaameedka ah. In kasta oo kharashka macaamil kasta uu qaali ahaa, haddana maal-gashigu wuxuu lahaa soo-celin aan caadi ahayn oo ku saabsan maalgashiga. Iyadoo safarka ganacsiga hoos u dhacay iyo dhacdooyinka la joojiyay, suuqleyda waxay leeyihiin xulashooyin kooban oo xadidan si ay u gaaraan rajadooda. Ma aha in la xuso xaqiiqda ah in shirkaduhu ay wadaan qaylo dheeri ah
Qof Kasta Oo Bulsheed: U Beddel Shaqaalahaaga Kordhiye Bulsheed
Sabtida, Oktoobar 20, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
EverySocial waa hogaaminta u doodista shaqaalaha iyo iibinta bulshada ee macaamiisheeda siisa celcelis ahaan isku xirnaanta 1,750 shaqaale kasta, 200% kororka dhuumaha iibka, 48% heshiisyada waaweyn, 4x kordhinta wacyiga calaamadaha, iyo toban meelood meel qiimaha bixisay barnaamijyada warbaahinta bulshada. Maxaa Loogu Doodayaa Shaqaalaha? Shirkad kastaa waxay leedahay awood, kheyraad aan laga faa'iideysan oo leh awood ay ku weyneyso suuqgeynta, wadista iibka & tamarta HR; codka iyo shabakadaha shaqaalahaaga. Si fudud loo dhigo,
Sidee Xirmooyinkaaga Khudbaddaadu ugu guuldareystaan ​​inay u adeegaan macaamilka
Arbacada, Agoosto 22, 2018 Eric Holtzclaw
Maalmihii hore ee suuqgeynta, dib bilowgii 2000, dhowr CMOs geesiyaal ah ayaa maal galiyay aalado qaali ah oo loogu talagalay inay ka caawiyaan si wanaagsan u maareeynta ololahooda iyo dhagaystayaasha. Kuwani hormoodyada adag waxay doonayeen inay abaabulaan, falanqeeyaan oo ay hagaajiyaan waxqabadka, sidaasna ay ku abuureen nidaamyadii ugu horreeyay ee teknolojiyadda suuq-geynta - nidaamyada isku dhafan ee keenay amarka, ololeyaasha la bartilmaameedsaday ee la furay, iyo farriimaha shaqsi ahaaneed ee natiijooyinka wanaagsan. Tixgelinta inta ay le'eg tahay warshadaha suuqgeynta dhowrkii sano ee la soo dhaafay waa